Distrochooser: Weebụsaịtị na-enyere gị aka ịhọrọ nri GNU / Linux Distro | Site na Linux
Distrochooser: Weebụsaịtị na-enyere gị aka ịhọrọ ezigbo GNU / Linux Distro
Linux Post Wụnye | | Noticias, Na-atụ aro
Nye ọtụtụ ndị ọrụ (ọhụụ ma ọ bụ ndị ọhụrụ) ọ mere na mgbe ha malitere n'ụwa GNU / Linux họrọ iyi a Na-atụ aro ma ọ bụ trendy distro, onye ozi sitere n'aka onye ọ bụla ma ọ bụ ndị otu ọ bụla bịakwutere ha Obodo ma ọ bụ Otu nke ha sonyeere ma obu nwe ha.
Ya mere, ọ na-abụkarị ikpe na GNU / Linux Distro na anyi ji abụghị ihe sitere na ezigbo nyocha usoro nke ihe anyi choro, choro ma nwekwaa. Ma nke ahụ bụ ebe ọ na-abịa n'ime ihe, na website nke Onye mgbaghapụ.
Onye mgbaghapụ Ọ bụ ihe magburu onwe saịtị karịsịa n'ihi na ndị ọhụrụ ma ọ bụ obere ahụmahụ ọrụ, dị ka ọ na-enyere ha aka ịhọrọ GNU / Linux nkesa kwesịrị ekwesị ma ọ bụ dabara adaba, dị ka mkpa gị egosipụtara na akwụkwọ nyocha emere nke ọma.
Mụọ maka Software na GNU / Linux na-enweghị wụnye ya
1 Distrochooser: Kedu ihe kacha mma GNU / Linux Distro maka m?
1.1 Banyere Distrochooser
1.2 Kedu ka Distrochooser si arụ ọrụ?
1.2.1 Nyocha nyocha
Distrochooser: Kedu ihe kacha mma GNU / Linux Distro maka m?
O nwere ike iyi ihe dị mfe ịhọrọ ma jiri a GNU / Linux Distro, ma nke bu eziokwu bu na nye ndi bidoro n ’uwa a, obuna maka ndi nweela mgbe itu ya, obu otutu mgbe, ebe obu na otutu uzo di, otutu n’eji ahoro iji Distro ebe amara dika. DEBIAN, Ubuntu, Mint, MX Linux, ma ọ bụ dị iche iche dị ka Openuse, Arch ma ọ bụ Manjaro.
Ikwu oge maka nyocha, nyocha na ule nwere ike ịba uru maka ọtụtụ, mana iji ya Onye mgbaghapụ, ị nwere ike nweta enyemaka ọzọ, nke bara uru ịghara ime ihe ahụ dị n'elu. Maka ebumnuche a, Onye mgbaghapụ were mpempe akwụkwọ ma ọ bụ ụdị ntanetị, nke ajụjụ 16 iji kọwaa ihe kachasị mma GNU / Linux Distros maka onye obia dika azịza ha si di.
Ugbu a, nke Distrochooser ọrụ na saịtị nwere nkwado n’ọtụtụ asụsụ, ya bụ, ọ na-abịa n’asụsụ German, Bekee, Chinese, French na Spanish. Ke adianade do, o nwere beta saịtị na mmepe, nke naanị na-abịa n'asụsụ German, Bekee na Italian.
Kedu ka Distrochooser si arụ ọrụ?
Onye mgbaghapụ rụrụ (egosi) a usoro (ihe / ọnọdụ) na anyị ga-ahụ na-esote, nke ahụ ga-aza ma ọ bụ dozie ya, nke na-ekpuchikarị akụkụ ma ọ bụ ihe dị iche iche, dịka ọkwa nke ihe ọmụma nke onye so na ya Mgbakọ, Informatics, GNU / Linux, ogo nke isi Kọmputa, Sistemụ arụmọrụ na Ngwa, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọzọ, anyị ga-eme nyocha ahụ iji hụ ihe ị kwadoro dị ka azịza anyị batara, ka e wee gbaa ndị ọzọ ume ka ha mee ya.
Ihuenyo mbu: Na Spanish.
Nkebi 1: Emere ụfọdụ nkesa maka nzube pụrụ iche, ụfọdụ maka iji ya kwa ụbọchị. Kedu ihe ị chọrọ?
Nkebi 2: Kedu ka ị ga-esi were kọmputa m agụ akwụkwọ?
Nkebi 3: Kedu ka ị ga-esi kọwaa ihe ọmụma m banyere Linux?
Nkebi 4: Olee otú ọtụtụ nhọrọ ị chọrọ ịgbanwe n'oge echichi? Ugboro ole nhazi mgbanwe ga-ejupụta na ndabara?
Nkebi 5: Enwere ike ịmalite ọtụtụ nkesa site na USB ma ọ bụ DVD iji nwalee nkesa na-enweghị gbanwee kọmputa gị ma ọ bụ wụnye ya na draịvụ ike. Ndị ọzọ nwere ike itinye na eriri USB (nkwụsi ike).
Nkebi 6: Ọ dị mkpa ịmata afọ ole sistemụ ahụ dị n'ihi na ụfọdụ nkesa agaghị agba na kọmputa ochie. Isi ihe kpatara nke a bụ ọdịda na nkwado maka teknụzụ ochie dịka usoro 32-bit processor na-akwado ihe owuwu 64-bit.
Nkebi 7: Distribfọdụ nkesa na-ahọrọ ịmepụta isiokwu na wikis maka onye ọrụ iji dozie nsogbu ha. Kedu ihe ị masịrị gị?
Nkebi 8: Linux nwere ike iji ọtụtụ ọrụ ọrụ dị iche iche ("Desktops"). Ọtụtụ nkesa na-eji desktọọpụ na ndabara. Ọ dị mkpa ka mara ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ a kpọmkwem interface. N'agbanyeghị nke ahụ, ịnwere ike ịgbanwe ma wụnye desktọọpụ ọhụụ n'oge ọ bụla.
Nkebi 9: Imirikiti nkesa bụ n'efu. Distribfọdụ nkesa na-enye nkwado ọzọ maka ego mbụ.
Nkebi 10: Nkesa dị iche iche na-etinye mmemme dị iche iche, ụfọdụ wụnye iji malite ịrụ ọrụ ozugbo. Ndị ọzọ na-enye naanị ntinye ntọala, ya mere ọ dị n'aka onye ọrụ ịhọrọ ihe ọ ga-arụ.
Nkebi 11: Akwụkwọ ikike (edemede) nke nkesa bụ arụmụka na-aga n'ihu. Fọdụ na-enye sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, ndị ọzọ na - anabata sọftụwia anaghị akwụ ụgwọ. Ikike ikikere na-enye onye ọrụ ohere ịgbanwe, kesaa ma jiri sọftụwia ahụ ha masịrị ya. Enwere ọnọdụ mgbe nkesa ga-eji sọftụwia anaghị akwụ ụgwọ, dịka ọmụmaatụ, maka ndị ọkwọ ụgbọala. Sọftụwia anaghị akwụ ụgwọ anaghị anabata mgbanwe ma ọ bụ nyocha koodu. Ọ dị mkpa ịmata ma ị nwere mmasị ọ bụla gbasara ụdị ikike ikike dị iche iche.
Nkebi 12: Distribfọdụ nkesa na-eji ọrụ ntanetị iji melite ahụmịhe onye ọrụ. Nke a nwere ike imetụta nzuzo nke onye ọrụ, onye ọrụ nwere ike nyochaa mgbe ị na-eji atụmatụ ndị ahụ.
Nkebi 13: Distribfọdụ nkesa na-enye isiokwu na akara ngosi nke ha iji mepụta ahụmịhe onye ọrụ zuru oke.
Nkebi 14: Distribfọdụ nkesa nwere ike iji atụmatụ pụrụ iche, dị ka nkwalite nchebe. Kedu n'ime atụmatụ ndị m chọrọ iji (ọ bụrụ na ọ bụla)?
Nkebi 15: Na Linux ị nwere ike iwunye ngwanrọ n'ụzọ dị iche iche. Can nwere ike ikpokọta ngwanrọ sitere na koodu isi ma ọ bụ wụnye ya site na nchịkọta. Kedu ihe ị masịrị gị?
Nkebi 16: Distribfọdụ nkesa na-enye mmelite ugboro ugboro, nke nwere ike imetụta nkwụsi ike sistemụ. Kedu ihe ị masịrị gị?
Nsonaazụ nke ule ahụ: Ihe nkesa Distrochooser kwadoro site na azịza ya bu:
os nke osiri
Na nkenke, ndị nke enyere m bụ ezigbo ndị ọzọ. Otú ọ dị, m na-ahọrọ na-eji m na omenala na kachasị version nke Linux MXkpọọ Ọrụ ebube.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" na weebụ «Distrochooser», nke bụ ihe magburu onwe saịtị karịsịa maka ndị ọhụrụ ma ọ bụ ndị na-enwechaghị ahụmahụ, dị ka ọ na-enyere ha aka ịhọrọ GNU / Linux nkesa ihe kwesịrị ekwesị ma ọ bụ dị mma dịka mkpa gị kwuru; bụrụ otutu mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Maka ozi ndị ọzọ, egbula oge ọ bụla ịga leta nke ọ bụla Ọbá akwụkwọ dị n'ịntanetị dị ka OpenLibra y JEDIT ịgụ akwụkwọ (PDFs) n'isiokwu a ma ọ bụ ndị ọzọ ihe omuma. Maka ugbu a, ọ bụrụ na ịchọrọ nke a «publicación», akwụsịna ịkekọrịta ya ya na ndi ozo, n'ime gi Ebe nrụọrụ weebụ kachasị amasị, ọwa, otu, ma ọ bụ obodo nke netwọk mmekọrịta, ọkacha mma n'efu ma mepee Mastodon, ma ọ bụ nchebe na nzuzo dị ka telegram.
Ma ọ bụ nanị gaa n'ụlọ obibi anyị na Ndokwa ma ọ bụ sonye na Channel Channel Telegram site na DesdeLinux ịgụ na votu maka nke a ma ọ bụ mbipụta ndị ọzọ na-atọ ụtọ na «Software Libre», «Código Abierto», «GNU/Linux» na isiokwu ndị ọzọ metụtara «Informática y la Computación», na «Actualidad tecnológica».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Distrochooser: Weebụsaịtị na-enyere gị aka ịhọrọ ezigbo GNU / Linux Distro
LXQt 0.15.0 bụ ugbua ebe a dị iche iche ndozi na mkpa mgbanwe
E wepụtala beta ikpeazụ nke Snort 3, sistemụ nchọta intrusion nke netwọkụ